Iindwendwe zakho kwimephu kaGoogle -Geofumadas
Iindwendwe zakho kwimephu yeGoogle
NgoJanuwari, 2010 Google umhlaba / imephu, ezintsha, Internet kunye neBlogs
Ukwazi ukuba zivela phi iindwendwe kwaye uzibeke emephini ngomnye wemisebenzi ebonelelwe yiGoogle Analytics, kodwa ukusebenza akusekho ukubonisa iimephu zakho. Umzekelo umele iindwendwe zam namhlanje, ngokungxama ukuba akukho kusondeza, ngaphandle kokuba ufuna ukujonga ngelizwe, kwaye ezo zinto zinobunzima azilawulwa.
Nangona kunjalo, abahlobo beZipwise, basebenzisa i-API yeGoogle Maps baye benza ithoyizi elincinci ukuba, ngokufumana i-hit yomfanekiso obekwe kwiblogi kunokubonisa iindwendwe zokugqibela ze-100 kwimephu.
Ukwenza oku, ikhowudi elandelayo ikopiwe kwintloko okanye kwisikhangiso sohlobo lwe-Adsense deluxe.
Nanku ndikubonisa umzekelo wendlela ummandla wempembelelo yendawo yaseSpain eyayiza ngayo i-Geofumadas kwi-10 PM, iVenezuela ngexesha. Ngokuqinisekileyo, ngokungenakudlula nje ukukwazi ukubona i-100 yakutsha ngaphandle kokuba ubambe ikhowudi yakho ye-API kwaye wenze amaqhinga okuthandayo.
Ukuguqulwa kwe-IP kulungelelwaniso lohlobo lat, lon ngumsebenzi okhoyo kwi-SQL yefom INET_ATON () kunye ne-INET_NTOA (). Nangona abahlobo be-Zipwise bebanga ukuba kukho indlela elula yokuguqula ngesandla:
Ngaloo nto, i-IP 12.34.56.78 utshintshwa ngokwenza uchungechunge lendlela:
12 * 256 ^ 3 = 201,326,592
34 * 256 ^ 2 = 2,228,224
56 * 256 ^ 1 = 14,336
78 * 256 ^ 0 = 78
Kude uthabathe kwifom:
Hehe, kulula nje Umlawuli weGeospatial yeBentley Imephu.
Kukho ezinye iinkcukacha ezinokukhutshwa kwiwebsite ye-Zipwise, kunye neenkonzo ezihlawulwayo ukufikelela kwi-data yakho.
Bentley Systems Blog egeomates My
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-Geofumed: imigca engama-48 emnyama nemhlophe
Post Next MapinXL, iimephu ezivela kwi-ExcelOkulandelayo »
Phendula omnye "kwiindwendwe zakho kwimephu kaGoogle"
Imisebenzi oyithethileyo (kunye nefomula) ibhekisela ekuguqulweni kwe-IP kwinombolo elula ukutsalathisa nokukhangela kwisiseko sedatha, kungekho kwi-latate lat, iso, eya kunikwa ngumbuzo xa ufumana uluhlu apho ip ingaguqulelwa ibe yinani.
Fumanisa amandla okuziva kude. Amava, yiva, hlalutya kwaye ubone yonke into onokuyenza ngaphandle kokubakho ....